Naqshadeynta Spongebob Cake + casharro - Blog
Naqshadeynta keega madadaalo iyo fududaanta in la raaco casharro ku saabsan sida loo sameeyo keeg qurux badan oo Spongebob ah!
Spongebob Squarepants waa dabeecad kartoon jecel oo waqti dheer jecel oo ku nool badda. Wuxuu ku nool yahay magaalada khiyaanada badan ee Bikini Bottom isaga iyo saaxiibadiis kala ah Patrick, Squidward, Gary iyo dhowr kale. Bandhigu wuxuu caan ku noqday carruurta iyo dadka waaweynba si isku mid ah markii uu ka soo muuqday Nickelodeon sanadkii 1999. Haddii aad taageere u tahay riwaayadaha kartoonka ah iyo haddii kaleba, waa inaad qirataa inay jiraan qaabab qurxoon oo qurux badan oo Spongebob ah!
Xuquuqda halkan Sugar Geek Show waxaan ku leenahay heerkeenna cajiibka ah Casharka Spongebob Cake loogu talagalay Xubnaha Premium iyo Elite waxaa baray yaabka yaabka leh ee Jessa Coline ee Farshaxanka Cunnada La Cuno! Haddii aad khibrad ka heshay suunkaaga oo ay ku jiraan qurxinta keega oo aad raadineysid wow, kani waa naqshadda keegga Spongebob adiga ah!
Waa camiran oo ay ka buuxaan faahfaahin aan caadi aheyn iyo farsamooyin la yaab leh si loo abuuro muuqaalka guud ee candhuufta ee Spongebob Squarepants oo lagu buuxiyo krabby patty! Qaab dhismeedka keeggaan wuxuu noqon karaa mid cabsi badan laakiin Jessa ayaa u kala jabisa si qofkasta uu u sameyn karo!
Waxay umuuqataa in Spongebob uu si toos ah uga baxay shaashadda TV-ga miyaanay ahayn? Keegayaasha astaamaha ah runtii way adkaan karaan in si sax ah loogu ekaado dabeecadda laakiin Jessa ayaa ku garaacday baarkinka waxayna ku tusaysaa sida loo sameeyo.
waa maxay keeg foosto foosto
Rinjiyeynta gacmaha, cadayashada hawada, shaqada tusaalaynta iyo inbadan oo ka mid ah waxay keenaan faahfaahinta nolosha waxayna siiyaan xoogaa dheeraad ah oo dhab ah iyo cabbir ah oo ay ugu baahan yihiin inay ka dhex muuqdaan keega kale.
Waxaan si gaar ah u jeclahay labiskiisa yar ee jilicsan iyo faahfaahinta sharaabaadkiisa shaatiga ah iyo kabaha madow ee dhalaalaya!
Dufanka krabby wuxuu ku fiican yahay buuggayga! Fiiri faahfaahintaas! Dufan, jiis, saladh iyo rooti si fiican loo dubay. Markaad qaniinto burgerkaan inkasta oo aadan dhadhaminaynin wax macaan mooyee. Haddii aad xiiseyneyso inaad sameyso super keega weyn ee burger waxaan halkaan ku haynaa Sugar Geek Show sidoo kale.
Fikradaha Cake Spongebob
In kasta oo aan dabcan qayb ka nahay naqshadeena keega Spongebob ah, waxaa hubaal ah in keegag badan oo kale oo Spongebob ah ay mudan yihiin in la hubiyo! Waa kuwan qaar ka mid ah kuwa aan ugu jecel nahay.
Labada shaqo ee cabbirkan keegga ah gabi ahaanba waa wax cajiib ah! Waxaan rabaa inaan idhaahdo waxay umuuqataa mid qeexitaan iyo daadad wata leh ubax boqortooyo sida aad ku samayn lahayd cookie. Waxay siinaysaa muuqaal sidan u gaar ah runtiina way soo muuqaneysaa.
Haddii aadan hubin isku dayga keegga Spongebob oo taagan oo kaliya markaa naqshad fadhiga sida keega oo kale ah ayaa qumman! Kudar faahfaahinta waxaadna wali heysaa keeg aad u qurux badan oo kudayasho dabeecada sifiican.
Keegga noocaan ah ee loo yaqaan 'Spongebob cake' waa mid aad u xiiso badan. Waan jeclahay cute hoosta badda faahfaahinteeda oo ay ku jiraan guriga cananaaska Spongebob. The Spongebob iyo Patrick toppers
sidoo kale runtii si fiican ayaa loo qabtay! Tani waa fikrad naqshad kale oo weyn oo loogu talagalay qof kasta oo raadinaya wax kale oo aan ahayn buuxa oo ku jira keega Spongebob.
Sida Loo Sameeyo Cake Spongebob leh Buttercream
Dad badan ayaa raadinaya naqshad fudud oo ah qaabka loo yaqaan 'buttercream Spongebob cake design' waxaanan ka helay mid cajiib ah kanaalka YouTube Channel LeNsCake Kdi. Waxay ku tusaysaa sida loo sameeyo wareejinta buttercream fudud ee wejiga Spongebob, ku dar meelaha qaar iyo soohdinta dhuumaha oo waxaad leedahay keeg runtii aad u qurux badan oo aad u fudud oo Spongebob ah.
Hab kale oo xiiso leh oo lagu heli karo naqshadda loo yaqaan 'buttercream Spongebob cake design' ayaa ah casharradan weyn ee ka imanaya Maandooriye My Cupcake ah oo loogu talagalay jiidaha keega keega! Dadku waxay umuuqdaan inay jecelyihiin kuwan kala jiidaya keega keega iyo qaabka Spongebob runti waxay amaahisaa naqshadeynta si fudud u sameynta macmacaan xafladeed qurux badan!
Sida Loo Sameeyo Cake Spongebob with Fondant
Waan jeclahay qaar ka mid ah Ann Reardon oo ka socda YouTube Channel oo aad caan u ah Sida loo karsado sidaa darteed waan dhaafi kari waayey oo ay ka muuqato muuqaaladan wanaagsan ee Spongebob keegga ah ee ay sameysay. Waa wax qurux badan oo majaajillo ah oo had iyo jeer casharradeedu aad u fudud tahay in la raaco bilow ilaa dhammaad!
Haddii aad raadineysid qaab fudud oo aan taagneyn, oo aan fadhiyin naqshadda keegga Spongebob oo leh fondant, tani waa wax aad u fudud oo la raaci karo casharro bilaash ah oo ku saabsan sida loo sameeyo dhammaan faahfaahinta cajiibka ah ee keegga Spongebob ee laga helo caanka YouTube Channel Cakes StepByStep.
Sida Loo Sameeyo Spongebob Cake Talaabo Talaabo
Haddii sawir-qaadayaashu ay intaa ka sii badan yihiin waxa aan helay sida ugu macquulsan sawirkii ugu wanaagsanaa ee aan abid ku arko internetka si aad u wanaagsan loo sameeyay naqshad keegga Spongebob ah! Waa mid nadiif ah oo si dhammaystiran loo fuliyay waxayna muujisay tallaabo kasta oo leh sawirro cad iyo tilmaamo qoran. Waxay muujineysaa wax kasta oo ka soo baxa la shaqeynta shaxanka sawirka illaa buuxinta, barafka, daboolaya keega iyo ku darista dhammaan faahfaahinta. Dhagsii sawirka si aad uhesho casharka buuxa!
Maxaad ugu sameyn weyday Spongebob iyo saaxiibbadiis miisaan yar si ay ugu dhejiyaan naqshad keeg ah jaranjaro? Waa kuwan casharro aad u wanaagsan oo ku saabsan sida loo sameeyo qaar ka mid ah dusha sare ee keega Spongebob oo ka farxiya kanaalka YouTube Channel Just Cake It.
Haddii aad ka fekereysay inaad sameyso keega Spongebob ha ahaato macmiil ama xubin qoyska ka mid ah, waxaan dhihi lahaa qoraalkan ma ku dabooshay fikradaha, naqshadaha iyo farsamooyinka! Macno malahan wixii isku-darka ah ee aad la soo baxdo waxaa hubaal ah inuu quruxsan yahay waana jeclaan lahayn inaan aragno! La wadaag sawiradaada Sugar Geek Show Bogga Facebook qof walba inuu arko!
cuntada fudud ee rootiga aan lahayn mashiinka rootiga
sida loo sameeyo xabbad buuxinaysa keega
sida loo sameeyo macaron faransiis ah oo talaabo talaabo ah
sida loo sameeyo miro guduud ah oo lagu buuxiyo fersken barafoobay